Nafana Fo Tamin’​ny Fivavahana Marina i Jesosy | Fiainan’​i Jesosy
Nankao Kapernaomy i Jesosy taorian’ilay fampakaram-bady tany Kana. Niaraka taminy ny reniny sy ny rahalahiny, dia i Jakoba, Josefa, Simona, ary Jodasy.
Nahoana i Jesosy no nankao Kapernaomy? Toa lehibe kokoa io tanàna io sady mahavantana ny olona kokoa ny mankao noho ny mankany Nazareta na Kana. Maro tamin’ireo mpianany vaovao koa no nipetraka tao na teny akaiky teny. Afaka nampiofana azy ireo tao amin’ny faritra niavian’izy ireo àry i Jesosy.
Nanao fahagagana koa i Jesosy tamin’izy tao Kapernaomy. Nandre momba izay nataony àry ny olona maro tao sy teny amin’ny manodidina. Tsy ela anefa dia tsy maintsy nankany Jerosalema i Jesosy sy ny namany mba hanatrika ny Paska taona 30. Jiosy tia fivavahana mantsy izy ireo.
Nisy zavatra tena miavaka voamarik’ireo mpianatra tamin’i Jesosy, rehefa tao amin’ny tempoly tao Jerosalema izy ireo. Mbola tsy nahita hoatr’izany mihitsy izy ireo taloha.
Tokony hanao sorona biby tao amin’ny tempoly ny Israelita, araka ny Lalàn’Andriamanitra. Nila sakafo ireo olona avy lavitra, nandritra ny fotoana nijanonany tao Jerosalema. Neken’ny Lalàna àry raha nitondra vola izy ireo mba hividianana “omby na ondry na osy” ary izay nilainy nandritra ny fijanonany tao. (Deoteronomia 14:24-26) Nivarotra biby na vorona tao amin’ny tokotany malalaky ny tempoly ny mpivarotra, vokatr’izany. Nanambaka olona ny sasany ka nataony lafo be ny zavatra namidiny.
Tezitra be i Jesosy ka nararany ny vola madiniky ny mpanakalo vola, nazerany ny latabany, ary noroahiny izy ireo. Hoy izy avy eo: “Ento mivoaka any ireo! Aza atao trano fivarotana intsony ny tranon’ny Raiko!”—Jaona 2:16.
Rehefa nahita an’izany ny mpianany, dia nahatadidy an’ilay faminaniana momba ny Zanak’Andriamanitra hoe: “Handany tanteraka ny heriko ny hafanam-poko ho an’ny tranonao.” Hoy anefa ny Jiosy: “Inona àry no famantarana hasehonao anay mba hanaporofoanao fa manana fahefana hanao izao ianao?” Namaly i Jesosy hoe: “Ravao ity tempoly ity, fa hatsangako izy ao anatin’ny telo andro.”—Jaona 2:17-19; Salamo 69:9.
Nieritreritra ny Jiosy hoe ny tempolin’i Jerosalema no tiany horesahina. Hoy àry izy ireo: “Enina amby efapolo taona ange no nanorenana ity tempoly ity e! Koa ianao ve hahatsangana azy ao anatin’ny telo andro?” (Jaona 2:20) Ny vatany anefa no tao an-tsain’i Jesosy tamin’ilay hoe tempoly. Tadidin’ny mpianany ireo teniny ireo rehefa natsangana tamin’ny maty izy, telo taona tatỳ aoriana.
Taiza avy no nalehan’i Jesosy taorian’ilay fampakaram-bady tany Kana?
Nahoana i Jesosy no tezitra noho izay hitany tao amin’ny tempoly, ary inona no nataony?
Inona no tao an-tsain’i Jesosy tamin’ilay hoe “ity tempoly ity”, ary inona no tiany holazaina tamin’izany?
Niaro ny Fivavahana Marina i Elia
Ahoana no hanahafantsika an’i Elia rehefa misy olona tsy manaiky an’izay ampianarin’ny Baiboly?
Hizara Hizara Nafana Fo Tamin’​ny Fivavahana Marina i Jesosy